▷ 🎮 Bugsnax 【Dib u eegis oo soo deji ✅】 - 【Isbarbardhigga】 2022
🎮 Bugsnax 【Dib u eegis oo soo deji ✅】
Meesha kuwa lamid ah ay ku dhadhamiyaan baradhada duban.
Mararka qaarkood magacu waa ciyaarta. Bugsnax, ciyaarta cusub ee ka socota horumariyaha Octodad Young Horses, waxay ku saabsan tahay qabashada cayayaanka ka samaysan cuntooyinka aadka u raaxaysan sida pizza, strawberries, dabacasaha, iyo nacnaca, kuwaas oo u beddela qaybaha jidhkaaga cunto markaad wax cunto. waxay. Waa cayayaan, laakiin laga sameeyay sandwiches. Bug… sandwiches? Bugsnax.
Waa wax aan waxba tarayn oo waalan oo xamaasad leh, taas oo ay weheliso qaabka fanka ee quruxda badan iyo midabka leh ee ciyaarta, dhoola caddaynaya wejigaaga oo ka dhigaya malo-awaalkaga kor u kaca. Rabitaanka la yaabka leh ee xoogga badan ee ah in wax badan laga ogaado adduunkan iyo makhluuqaadkeeda la yaabka leh ee la yaabka leh ayaa sii hurinaya dhammaan dhinacyada khibradda. Xariifnimadiisa, haddii xoogaa xamaasad leh, xujooyinka waxay ku wareegayaan qabashada Bugsnax. Sheekadu waxay kuu dirtaa inaad baarto siraha gurigiisa, Jasiiradda Snaktooth, iyo degeyaasheeda. In kasta oo dhiirigelintaasi ay tahay mid maqaar-saar ah, dhiirigelintaada dhabta ah waxay noqon doontaa inaad aragto dhammaan magacyada iyo naqshadaha Snak ee xariifka ah, ciyaarta aad jidka kula kulanto waxay leedahay walxo badan.
Sideen u bilaabi karaa inaan sharaxo waxa ka socda Bugsnax? Waxaad gacanta ku haysaa saxafi baadhiseed oo ka warbixinaya socdaalkii sahamiyaha Lizbert Megafig ee Jasiiradda Snaktooth, halkaas oo uu ka helay caddaynta ilbaxnimo qadiimi ah iyo Bugsnax macaan oo dahsoon. Markii uu yimid, Lizbert waa la waayay, gumeysigiisii, Snaxburg, wuu kala diray. Hadafkaagu, ciyaarta inteeda badan, waa inaad hesho dadka jasiiradda deggan oo aad ku qanciso inay dib isugu noqdaan si aad sheekadaada u barato oo aad u ogaato waxa ku dhacay Baadhyihii Lumay. Inta badan, "qancin" macnaheedu waa quudinta Bugsnax.
Dunida Bugsnax waa mid midab leh, sida buuga carruurta. Dhammaan jilayaasha bini'aadmigu waa timo, indho-weyn, makhluuqa Muppet u eg oo loo yaqaan Grumpuses. Anigoo ah qof cunto jecel laakiin neceb dhammaan cayayaanka, waxaan ku farxay inaan helo Bugsnax mid la jecel yahay oo soo jiidasho leh. (Furaha, waxaan u maleynayaa, inay ahayd in qof walba la siiyo indhaha googga ah ee farshaxanka iyo qaabka farshaxanka.) Marka la soo baxayo bogga Pokémon, mid kastaa wuxuu leeyahay magac xariif ah, oo sharraxaya, kaas oo ay kor ugu sheegaan markay gurguuranayaan. Sahaminta noolaha kala duwan ee Jasiiradda Snaktooth, oo u dhaxaysa kaymaha iyo xeebaha ilaa canyons iyo meelaha ugu sarreeya ee barafka, baadhista dhammaan makhluuqaadyada yar yar, ka baadhista hantidooda, iyo ku-fiirsashada qaybtooda waa daaweyn dhab ah. Waxaa jira 100 Bugsnax ah, kuwaas oo qaar ka mid ah ay yihiin kuwa reskins ah oo lagu kala beddelay palette palette, laakiin helista mid cusub had iyo jeer waa mid xiiso leh.
Fryers heli? Caaro shiilan!
Si kastaba ha ahaatee, si aad u qanciso muwaadiniintii hore ee Snaxburg, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso wax ka badan daawashada. Helitaanka gacmahaaga Fryders macaan (caaro shiilan), Crapples (carsaanyo tufaaxa) iyo Ribblepedes (milipedes feeraha barbecued) waxay kaaga baahan tahay inaad caqli yeelato. Qabashada nooc kasta oo Bugsnak ah waxay soo bandhigaysaa xujo gaar ah; Mid kastaa wuxuu leeyahay sifooyin kala duwan oo tilmaamaya sida ay uga falcelinayaan adiga, qalabkaaga, iyo Bugsnaxes kale. Qaar markay ku arkaan way carari doonaan, qaarna way ku eryan doonaan. Qaarkood waxaa lagu qaban karaa dabinka ay ku hayaan meel fog, halka qaar kalena ay jebi doonaan oo ay u baahan yihiin in si uun looga takhaluso ka hor inta aan la ordin oo aan shabag lagu qaadin. Mar dambe qaar iyaga ka mid ah ayaa macno ahaan dab qabadsiinaya, markaa waa inaad heshaa hab aad ku qaboojiso ka hor intaadan ku boodin ficilka.
Waxay leedahay qalabyo kala duwan oo ku siinaya dhawr ikhtiyaar oo aad ku maareyn karto Snax. Dharbaaxadaada dharbaaxada ayaa kuu ogolaaneysa inaad sameyso suugo kala duwan (ketchup, suugo kulul, ranch, shukulaatada, iwm.) kuwaas oo loo isticmaali karo sed ama ka celin, iyadoo ku xiran waxa aad isku dayeyso inaad qabato. Waxaad haysataa xadhig-xawaalle ah kaas oo hoos u dhigi kara xayawaannada gardarrada leh oo hoos u dhigi kara Snax ee ka baxsan xadka. Si kastaba ha noqotee, inta badan, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho qalabkaaga si aad isugu xirto laba Snax oo aad la falgasho si aad uga dhigto mid la qabsan karo. Tusaalaha ugu horreeya, Bunga (bug hamburger) ayaa ku dallaci doona wax kasta oo lagu daboolo ketchup, markaa marka Shishkabug aadka u cabsida badan (kutaan u eg shishkabob-ka qudhaanjada) uu ku dhuunto duurka si uu uga baxsado dabinka, waxaad ku tuuri kartaa ketchup meesha qarsoon soo jiid Bunga oo eryada Shishkabug. In kasta oo ay naadir ku qaadato in ka badan laba Snax in ay is dhexgalaan si loo sameeyo tallaal, habka isku geynta iyaga ayaa u baahan xoogaa fikir hal abuur leh. Ma dhihi lahaa in mid ka mid ah kuwan ay dhab ahaantii adag tahay in la ogaado, laakiin waa inaad ka fikirtaa meel ka baxsan sanduuqa, waxayna ku dareensiinaysaa caqli-gal marka qorshe la dejiyo.
Mawduucyada waraysigu kaliya ma rabaan inaad ogaato Bugsnaxkooda; Waxay rabaan inaad sidoo kale siiso Snax. Oo markaad quudiso, qayb ka mid ah jidhkaaga ayaa isu rogi doonta cuntadii aad hadda cuntay (ama wax la xidhiidha). Isla bilawga bilawga, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad doorato qaybta jidhka ee isbeddelaysa, u beddelashada Bugsnax walxaha qurxinta. Waxaad sii wadi kartaa inaad ku quudiso Bugsnax dabeecad kasta wakhti kasta, adigoo u beddelaya beddelka cuntada aan la taaban karin ee sii kordheysa. Si kasta oo aad u beddesho Grumpus, had iyo jeer waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan.
Grumpus on Bugsnax (waxaa lagu qabtay PS5)
Farsamoyaqaan gameplay ahaan, waa xoogaa liidasho. Qaar ka mid ah hawlgallada ikhtiyaariga ah ee dambe, qaar ka mid ah gumaystayaashu waxay ku weydiin doonaan inaad ku qabato Snax midabyo gaar ah ama sifooyin gaar ah oo aad ku dabaqdo qaybo gaar ah oo jirka ah, laakiin taasi dhab ahaantii ma saameynayso sida aad u qabato Bugsnax ama habka aad u hesho. . Jidhku wuxuu wax ka beddelaa qodobbada sheekada, sidaa awgeed marna uma eka mid gebi ahaanba ka sarreeya, laakiin makaanikada dhabta ahi waa uun madadaalo.
Sheekada weyn ee Bugsnax waxay ugu horrayn ku soo baxdaa wada sheekeysiga uu la leeyahay degayaasha marka ay ku noqdaan Snaxburg. Marka ay soo noqdaan, waxaad heli doontaa fursad aad ku wareysato mid kasta oo iyaga ka mid ah, inaad wax badan ka ogaato shakhsiyadooda iyo asalkooda, oo aad hesho tilmaamo ku saabsan siraha waaweyn ee luminta Lizbert iyo asalka Bugsnax. Sheekada Caalamku waa bogag maahmaah ah oo rogan, kugu dhiirigelinaya inaad sii dhex socoto. Waa xoogaa la saadaalin karo, laakiin taasi igama joojin inaan rabo inaan arko sida ay wax u socdaan.
Wadnaha sheekada Bugsnax kuma jirto sheekada, laakiin jilayaasha. Inkasta oo ay u muuqdaan sawir-gacmeed, midab leh, iyo goofy, dadka Snaxburg waxay leeyihiin shakhsiyad dhab ah iyo sheekooyin shakhsi ah oo ay u sheegaan, haddii aad rabto inaad maqasho. Ka dib markaad ku qanciso inay ku noqdaan magaalada, qof kastaa wuxuu leeyahay hawlo taxane ah oo ikhtiyaari ah oo aad ka caawiso shaqadooda iyo / ama hawlahooda gaarka ah. Beffica, oo ah qoraagii hore ee xanta ahaa ee xiisaha lahaa, ayaa ku weydiinaya inaad basaasto dadka kale ee la degay saqda dhexe. Triffany, khabiirka qadiimiga ah, wuxuu rabaa in laga caawiyo sahaminta burburkii hore. Mar kasta, dabeecad kastaa waxay ku dhammaataa inay muujiso inay la tacaalayaan arrimo shakhsiyadeed oo qoto dheer: dhibaato la tacaalida luminta ama guuldarada, niyad-jabka, walaaca. Mararka qaarkood waxaad ku dhammaataa inaad iyaga ka caawiso dhibaatooyinkan waaweyn, laakiin marar kale ma samaynaysid. Xitaa marka aadan awoodin, waxaa jira waqtiyo bini'aadan oo dareen leh marka jilayaashani ay kuu muujiyaan adiga. (Oo la yaab leh, haysashada geesaha strawberry ama sanka burrito kama dhigayso wax yar oo la aqoonsan karo.)
La yaab ma leh, tayada ugu fiican ee Bugsnax waa xirfadiisa iyo soo jiidashada. Yaabka iyo raaxaysiga aad ka hesho markaad aragto Bugsnak oo lulaya ama daawato qof cunaya oo cududdiisa u rogaya cunto waligiis ma tagin. Taas oo keliya ayaa ka dhigi doonta Bugsnax mid u qalma, laakiin hal-abuurka hal-abuurka leh iyo sheeko-sheekeysiga fekerka leh ayaa siinaya jirka iyo qoto dheer si ay Snak ugu ekaato cunto.
Soo deji Bugsnax
Soo hel, ugaarso oo qabso 100 nooc oo kala duwan oo Bugsnax ah oo leh boodhyo iyo bacyo kala duwan.